အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တောင်းဆိုထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များနဲ့ တီချမ်းရဲ့ တိုဟူးနွေး
လေ့ရှိတယ် တီတို့က သက်သတ်လွတ်။ ကြိုက်သလိုစားပါလေ။ အသားနဲ့ စားချင်ရင်တော့ အသားနှစ်လေး ချက်ထားပေါ့နော်။ ဒီမှာ ကြည့်ချက်နည်းကို.....ဝက်နဲ့ အမဲနဲ့။ တီတို့ကတော့ သက်သတ်လွတ်ပဲလွေးပါတယ်။
Posted by တီချမ်း at 10:25 AM
T T Sweet March 30, 2012 at 1:44 PM
ခုလေးတင်ပဲ အိမ်မှာ တို့ဟူးနွေးလုပ်စားခဲ့တယ် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်။ မနေ့ကပဲ Luke Nguyen ရဲ့ ရှိူးမှာ အင်းလေးက တို့ဟူးနွေးလုပ်နည်း ရိုက်ပြလို့ စားချင်တာနဲ့ လုပ်စားလိုက်တာ။ တို့ကတော့ ကြက်သားလေးနဲ့ သတ်သတ်မလွတ်ဘူး တီချမ်းတို့လို။
Yin March 30, 2012 at 4:17 PM
Since u r in Cambodia, come to Vietnam. Its very near. Come come... I will be ur tourist guide..
Evy March 30, 2012 at 4:27 PM
စားချင်ထှာ။ သူများပြောလို့ ကြားဖူးပါတယ်။ လက်ဝဲ လက်ယာ နှစ်မျိုးလုံးမွှေရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ။ လုပ်နည်းအတွက် ကျေးဇူး။
အေးစုစံ March 30, 2012 at 5:29 PM
တီချမ်းက အေးစုစံ ရဲ့ ကြားဆရာ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ဆရာ့ ဆရာ ဆရာပါ (ဟင်းချက်နည်း သက်သက်ပါ )ဟိ ဟိ
လက်ဝဲ လက်ယာ မွှေရင်ဘာဖြစ် လဲ ကြေား ဦးလေ.. .
SHWE ZIN U March 30, 2012 at 7:13 PM
တီချမ်း အခုမြန်မာပြည်မှာ .com မပြောင်းလဲ ဘလော့ဂ် ရေးလို့ ရနေပြီ ဘလော့စပေါ့ က ပိတ်မထားတော့ဘူးလေ အေးဆေးဘဲ ဘာမှ မပြောင်းနဲ့ ဒီတိုင်း သာလာခဲ့ စာတင်လို့လည်း ရပါတယ် အခု နဲနဲတော့ ကောင်းနေပါပြီ
Lei Naing March 30, 2012 at 9:21 PM
I absolutely love reading all of your blog posts. Your unpretentious way of writing, step-by-step recipes & sense of humour really make my day & night. Thank you.What an amazing talent you have.. Way to go!!!
Anonymous March 31, 2012 at 5:26 AM
Hi Ti Chan, Which bean should i use? chick pea or yellow pea? I am going to buy in Indian Grocery store and i don't know which one? thanks
တီချမ်း April 1, 2012 at 12:07 PM